Isimemezelo sikandunakulu sesikhumbuzo sakwashobashobane – Inkatha Freedom Party
Isimemezelo sikandunakulu sesikhumbuzo sakwashobashobane
Phakathi kokunye akuphawulile uNdunankulu waKwaZulu-Natali uMhl. Sihle Zikalala ngenkathi ethula iNkulumo yeSimo seSifundazwe ngoLwesithathu (04 Mashi 2020), uthe uHulumeni wesiFundazwe unqume ukwenza izinhlelo zokukhumbula abantu bakithi abalahlekelwa yimpilo yabo esibhicongweni sakwaShobashobane.
Sisishayela ihlombe isinyathelo sikaHulumeni wesiFundazwe ngalomcabango okhombisa uzwelo emindenini yalabo abedlulayo.
Sengikushilo lokho ngifisa ukunxusa uNdunankulu ukuba awuqhube lomkhankaso ngobunyoninco obulindeleke kuyena ngokwesikhundla sakhe sokuba nguMholi weSifundawe. Indlela yokwenza lokhu, ngombono wami, ukuba uNdunankulu azigweme izenzo ezinokudweba isithombe esithi usika nganxanye njengommese. Lokhu ngikusho ngoba sezibekhona ezinye izinhlelo zokukhunjulwa kwabaphangalalayo namaqhawe ezidweba isithombe esithi ubuholi beqembu elihola leSifundazwe bubuka nganxanye uma kuthathwa lezinyathelo.
Ngikusho lokhu Mhleli ngoba uKhuzeni ukugcizelele ukuthi ngalesisenzo uHulumeni uhlose ukuqhubela phambili umoya wokubuyisana. Ukubuyisana-ke akunakupheleliswa nxa kusala ngaphandle ezinye izinhlaka nabantu abathintekayo. Umlando uyazi ukuthi ukubuyisana akhuluma ngakho uKhuzeni kusukela esibhicongweni esiyihlazo esachaphazela ikakhulu amalungu nabesekeli be-ANC neNkatha. Ngakhoke kubalulekile ukuba uHulumeni aqikelele ukuthi izinyathelo ezihlose ukuqinisa umoya wokubuyisana aziphazanyiswa ukuthi ezinye izinhlangothi ezithintekayo ziyazehlukanisa nayo ngoba zikhononda ngokuthi izinyathelo ezinhle zikaNdunankulu zinokuchema nohlangothi oluthile kwezombusazwe.
Njengoba kunezingxoxo zokuphothula udaba lokubuyisana phakathi kwe-ANC ne-IFP, kumqoka ukuba nezenzo zethu singabaholi zikhombise ukuthi sizinikele ngeqiniso kulomgomo.
Ngakho ngiphakamisa ukuba uKhuzeni, njengoNdunankulu wethu sonke nanjengoMholi we-ANC eSifundazweni, azithwese umthwalo wokuhlanganisa ubuholi be-ANC ne-IFP kuSishayamthetho kuxoxwe ngalomkhankaso omuhle kangaka; ikakhulu ngoba akubanga yisibhicongo sakwaShobashobane kuphela esehlela leSifundazwe. Zikhona izibhicongo lapho kwashabalala khona amalungu nabesekeli beNkatha. Isibonelo nje esisodwa, yisibhicongo sangonyaka wezi-1987 kwaShange lapho kwacekelwa khona phansi intsha yeNkatha eyishumi nantathu.
Mhleli sesakusho siphindelela thina ku-IFP ukuthi siyakwemukela ngokuzithoba nokudabuka ukuthi amalungu ethu ambandakanyeka odlameni. Lona ngumlando esingaziqhenyi ngawo. Kepha kuyasikhathaza ukuthi kusekhona kuleSifundazwe abadweba isithombe esithi abantu abaphangalala odlameni ngabohlangothi olulodwa. Yilokucabanga nezenzo okuzodala ukuthi imizamo emihle kaNdunankulu nabanye abaholi iphenduke isithukuthuku senja.
UM. Joshua Mazibuko
ILUNGU LESISHAYAMTHETHO SAKWAZULU-NATALI ELIMELE I-IFP